Kaadhka Codbixinta iyo Kaadh Diwaangalinta Waxay Ahayd In Mar Lawada Bixiyo BY:Maxamed Jeex | Lughaya.Com
Waxa dhawaan la bilaabay qaadashada kaadhka cod bixiyaayaasha iyadoo horena loo qaatay kaadhka diwaangalinta codbxiyayaasha, waxaana haboonaynd iyadoo dhinacyo badan laga eegayo in hal mar dadka lawada siiyo kaadha diwaangalinta iyo kaadhka codbixiyaha, waxa jirta maanta in dad badan oo reer guura u badan aan laga helayn ama ay ka hayaameen goobtii lagu diwaangaliyay taasoo ayna ka qaadan karin ama ayn aka codayn karin goob kale. Waxa kale iyana soo baxday sida imika
Magalada Borama laga soo sheegayo inay dad badani ayna wali qaadan kaadhka codbixiyaasha iyagoo loo nisbeeyay in ay ka waayeen meelahii ay hore iskaga diwaangaliyeen ee hore loogu sheegay inay kaadhka codayntana ka qaadan doonan. Waxa haboonayn in labada kaadh hal mar lays wada raaciyo ka diwaangalinta iyo ka codbixintaba. Waxay kaloo dhimi lahayd kharashaadka faraha badan ee labada kaadh qadashadooda ku baxaysa iyo wakhtigaa faraha badan ee lagu lumiyay.
Waxaa moodaa in Gudidu diwaangalintu ay mashruuc ka dhiganayaan waxyaabo badan oo ku haboonayd inay hal mar wada qabtaan ama ku fiicnayd inay hal mar wada bixiyaan. Dalkeena daruufo badan ayaa ka taagan oo dhinackasta ood ka eegtaba ay arkayso dayacnaan iyo in loo tudho oo hantida yar ee la hayo loo farsameeyo si haboon. Laakin waxa inoo muuqata in meelkasta dadka jooga ay ku tagri falaan awoodooda sharci iyo ta dhaqaalaba dalkana ayna u tudhin.
Waxaa iman doonta in qof walba ilaahay xisaabin doono maalinta qiyaamaha sidaasi daraadeed waa inaad komishanow aad ilaalisaan dadkiina wixii u wanaagsana aad si fiican ugu qabataan laakiin maaha marka mashruuc la inii dhiibaba inaad sanado badan ka dhigataa si aad lacag uga heshaan waar ilaahay ka cabsada qabri ayaa ini sugaaye.